SHEEKO JACAYL AH: Shandaranley – Balayax Oo Nafta Ka Quustay Q:5aad - Jigjiga Online
HomeDhaqankaSHEEKO JACAYL AH: Shandaranley – Balayax Oo Nafta Ka Quustay Q:5aad
Hase yeeshee, Balayax, habaq-habaqdii orodka ayuu xusuustay tabihii libaaxa la isaga difaaci jiray. Ka dib go’iisii ayuu hudhunka gacanta bidix ku duubtay, wuxuuna ku leexday guri madhan oo laga guuray, dabadeedna markuu arkay inaanu si kale ku baxsanayn ayuu geed oodda guri caska laga guuray ku dhexyaal degdeg u koray. Libaaxii isaga oo goojinaya oo Balayax raadkiisa sanka ku haya ayuu dhakhso u soo gaadhay Balayax oo geedkii sii koraya, ka dibna cidiyaha ayuu la haabhaabtay, isaga oo gurxamaya, laakiin Balayax wuu ka baxsaday oo ma gaadhin libaaxii, ka dibna intuu geedkii dhakada uga baxay ayuu rako yar badhida saaray, gacmahana labo laamood oo kala durugsan ku kala cuskaday.
Libaaxii intuu indhaha kor u laliyey, afkana kala waaxay ayuu geedka hoostiisa istaagay. Belaayo, kolba ta dambe ayaa darane, Balayax, oo geedkii fuushan oo is leh, belaayadii waad ka badbaaday iskanaeegaya inuu libaaxu ku soo boodo, ayuu hadana maqlay sanqadh kale oo geedka gebigiisaba wada ruxday, wuxuu maqlay shamamax, ur aad u qadhmuuna waa uriyey. Kor buu eegay, saa wuxuu arkay bahal mas ah, oo dabadu orgi le’ektahay oo madaxiisa balaadhka aad yaabto, oo intuu laan kale kaga soo gudbay gacantiisa soo dhaafay, aadna u miliqsanaya oo galaabi xiniya carrab labo faraarle ah, oo aad xadhig moodo. Waxa labo iyo luqun modoobe aad u dhalay oo geedkaasi hoygiisa yahay, gurigana reerkii degaaba uga qaxay. Ninkii Balayax dhidid buurbuuran ayaa shax ka soo yidhi oo tin iyo cidhib qooyey. Ka dibna intuu Balayax indhaha galka ka rogay, oo afku in taako le’eg kala tegay ayuu gacantii masku ka soo korayey si degdeg ah, kor ula booday, isaga oo qaylinaya oo firka
naxsan, ayuu luquntii maska gacanta si xooggan ugu daafadeeyey, dabadeedna maskii ayaa dhulka u dhacay.
Culayska masku qof buu miisaan le’eg yahay, ka dibna meel Libaaxii u dhow ayuu gab ku yidhi, dabadeedna Libaaxii ayaa mooday ninkii geedka fuulay oo soo dhacay, ka dibna ku soo booday. Maskii iyo Libaaxii oo mid waliba cadhaysan yahay ayaa geedka hoostiisa daf is yidhi, Libaaxii wuxuu bahal qaniinyo ah ka buuxsaday adhaxdii maska, balse maskii ayaa
isna miciyihiisii waabayda lahaa ku arooriyey dhegtii libaaxa. Ka dibna sidii ay isu haysteen ayey labadoodiiba naftu iskaga dul baxday. Balayax naxdintii ayuu ku qalalay laan geedka ka mid ah, welina cabsidii kama hadhin, waayo wax jawaab ah kumay soo celin oo ma oga inay labadii bahalba dhinteen. Dabadeedna habeenkii oo dhan, wuxuu ku tigtignaa geedka dushiisa, wuuna arkayey inay bahaluhu isku maran yihiin.
Hablo wadaan awrtaas oo alaabo benderka weyn laga keenay lagaga soo qaadayey meel tuulo ah, ka dibna Balayax awrkii buu ku xidhiidhsaday. Habalaha awrta wadaa way geeraarayaan, waxayna leeyihiin; “waar cadaawe-cadaawow, waar cadaawe halyeyow, Alla xaluu tiir ku xidhnaayoo, alla shaluutaagan ahaayoo, Alla maanta waa tub ku joogeey, ululu- lulu”.
Luuqdaa baxsan iyo mashxaradaasi, waxay Balayax ka mash-quulisay su’aalo uu jidka isku sii waydiin lahaa, waxayse Balayax iyo awrkii Dhiddar, wadadu ku saddex noqotay, markii ay gabdhihii iyo xidhiidhii awrta ahayd, u leexdeen tuuladii ay ku socdeen.
Waa ma dhacdo inay qalbiga Balayax ka tasowdo xusuusta Cudbi. Markasta iyo meel kasta Ayaaniba ayaan ka tilmaamane, wuxuu Balayax xusuustay xilligii hore ee uu haasawahoodu toosnaa, sidaa awgeed wuxuu socodka ku xusuustay, goor casar gaaban ah, oo ay isaga (Balayax) iyo wiil kale ay ku soo cadceedsadeen Cudbi iyo gabadh kale oo kayn aftoollin ah, ka guranaya cawska loo yaqaan timo hableedle iyo caws garaf, oo ah noocyada lagu sameeyo harrarada quruxda badan. Labada hablood, waxay dhexda ku xidhan yihiin foodado aboole ah. Cudbi waxay lebisan tahay, toob garbo banaan, mindi yar ayey kolba bur ku goosanaysaa, oo sidii goray qadhaabsanaya ayey kolna dhulka ku foorarsanaysaa, kolna kor uga toosaysaa. Cuddoonaanta Cududaha, xiisaanka abaadhyaha ee luqunta ku xardhan iyo qosolka xishoodku ku dheehan yahay, ee Cudbi ayey galabtaasi noqotay, galab ay xusuusteedu ka hadhi wayday Balayax, waxayna ku noqotay arrami ugu soo kacda sida qaniinyada abeesada, waxbase uguma jilla hadii uu maalintaa gebi kala dhexyaalo, isaga (Balayax) iyo Cudbi
balse qadarkaa xusuusta ah, ayuu ku dhaafay masaafo balaadhan. Mar danbe ayuu sidii qof dheelalawsan madax kor u qaaday, dareenka wajigiisa ayaa kalgacayl la dheellintay, ka dibna waxa labadiisa indhood ka soo qabax yidhi baro waaweyn oo ilmo ah. Hadana inta uu keligii isu dhoolacadeeyey ayuu hareeraha eegay, mise wuxuu marayaa Tuuladii uu caawa u sii hoyan lahaa afkeeda. Balayax, weligii wuxuu aad u jeclaa inuu mar uun magaalo weyn tago, isagoo lacag awr-gool ah la siisto sita, wuxuuse maalintaa ka jeclaa inuu cudbi mar qudha arko.
Balayax wuxuu islahaa Libaaxa iyo masku iyagaa isku mashquulsan, oo hadii aad isdhaqaajiso way kugu soo baraarugi doonaan sida awgeed, sanqadh neefsasho ka badan wuu iska ilaaliyey habeenkii oo dhan, qalbigana wuxuu iska lahaa “Ilaahow colkayaga colku furo” waxa kale oo uu hoos ugu xanshaashaqayey “Alla maxaa kugu soo watay, geedkan jaan, ee
aad dhirtaa kale u fuuli wayday” ayuu naftiisa ku canaanayey.
Balayax,wuxuu habeenkii oo dhan geedka dushiisa ku tig-tignaadaba, markii uu kaaha waaberi soo iftiimay, ee nin iyo geed lakala gartay ayuu hoos u soo yara daadegay, oo isha ku biniiniyey labadii bahal oo geedka hoos jiifa, shakibaa kaga jiray inay bahaluhu nool yihiin iyo in kale. Dabadeedna wuxuu arkay dhiig badan oo maskii ka qulqulay iyo Libaaxii oo
lugta taagay, ka dibna qunyar buu hoos u soo dhaadhacay, isagaoo weli shakisan, oo aad isu banbaaninaya dhulka markuu qoobka la helay, isaga oo aan xagaa iyo xagaa toona eegin ayuu qarjaf yidhi oo dhababaco cagaha wax ka deyey, dabadeedna isaga oo aan marqudha xiiq-tiiran, ayuu oradkii ku tegay meel saddex geel daaq u jirta geedkii. Balayax, intuu dhowr
jeer xagga dambe qooransaday ayuu isma taagine kadle cagaha boorimaystay.
Weli wuu naxsan yahay, wuxuuna u muuqdaa nin belaayo ka samato baxay cunto uu dhadhamiyo, waxa u noqotay qodxanyaha jeerinka ee canbuusha loo yaqaan, faraha curdinka ah, xaangeenyada iyo geed midhoodka midhoodka oo curdin badan lahaa. Ta kale, adeenti dad aragooda wuu iska ilaalinayaa, oo kaga darran bahalihii xalay helay waayo wuxuu ku soo fool leeyahay jiiddii ay deganaayeen beesha Cudbi ee ay beeshooda colaaddu dhex martay. Sidaa awgeed, wuxuu ilfoojigo leh, iskaga eegayaa wixii bidhaan rag ah, waayo wuxuu ka baqayaa in la arko oo hadii la garto dhegta dhiigga loo daro. Balayax, goor casar gaaban ah, ayuu gaadhay jiidii beeshu deganayd, dabadeedna isaga oo isqarinaya ayuu iska dhex qaaday
kaymihii xooluhu daaqayeen. Wuxuuna ka baadhayey xoolaha, kaynta daaqaya wax leh, summadda Cudbi reerkooda, balse mar dambe ayuu arkay awr raray ah, oo qoorta ku leh laba farood iyo hareed, dabadeedna wuu gartay inay awrta summadda lihi, ay tahay awrtii Cudbi reerkooda, aad buu u farxay, ka dibna kayntii awrtu daaqaysay ayuu dhabbacday, markuu cabbaar meel caro bataax ah, oo awrta u dhaw jiifay, ayuu mar dambe meel suryo ah ka
hallacsaday labo dumar ah, oo awrtii xadhkaha ka furfuraya, ka dibna intuu soo dhukusay ayuu ku soo dhawaaday si uu wejiyadooda u aqoonsado.
Wuxuu soo dhukusoba, hal cabbaar ah markuu u soo jirtay ayuu gartay inay labada dumar ah, midi tahay Cudbi dabadeedna wuxuu hoos u yidhi, “Qoodhay iyo xerraday, waa iyadii”. Balayax, markuu Cudbi isha ku dhuftay waxa jidhkiisa isku jebisay jidhiidhico farxadeed, madaxana waxa ka fuqday qolof weyn, jawi nayaayiro leh, ayaa ku soo kordhay dareenkiisa wuxuu isku qanciyey inuu muraadkiisii gaadhay, cabbaar buu soo dhukusay oo ku soo dhowaaday, markuu wax yar u soo jiray ayey Cudbi iyo gabadhii kale awrtii xadhkihii ka wada furfurteen oo intay labada dhinac isaga toociyeen dabada kaga dhaceen, una caraabiyeen xagaa guryihii Balayax, baadidii uu meesha dheer uga soo socdaalay aad bay ugu
dhowdahay laakiin lama hadli karo, oo wuxuu ka dabbin dhowrayaa gabadha kale ee Cudbi la socota. Sidaa darteed, wuu iska dabo galay, isaga oo isqarinaya, dhowr jeer buu isku dayey inuu Cudbi keligeed is tuso laakiin uma suuro gelin taasi. Hase yeeshee, gabdhihii oo meel dhexe awrtii sii caraabinaya, ayey labo nin oo dhalinyaro ahi, ku soo lug dareen. Labada nin mid ka mid ah, ayaa degta ku sita qori rayfal ah, waxayna labadii nin awrtii la caraabiyeen gabdhihii, ka dibna afartii qof, kaftan iyo sheeko hallaasi ah, ayey bilaabeen, afarta qofna waa
SHIL Gaadhi Oo Dad Badan Ku Dhinteen Oo Ka Dhacay Wajaale Iyo Jigjiga Dhexdooda